> Resource > DVD > Sida loo Guba JVC Everio videos in DVD
JVC Everio videos qabashada kamaradaha taxane in TOD ama mod format. Kuwani videos diiwaan dhoofin karo computer si xaalkaa, share ama xataa gubi in DVD. Oo dad badan doortaan in ay gubi JVC Everio videos in DVDs, waayo, waa hab fiican oo aad wada xajisaan xusuus macaan weligiis ama wadaagaan daqiiqado ku faraxsan qoyskaaga iyo saaxiibadaa. Haddii aad qabto load ah videos toogtay aad camera JVC Everio oo doonaya in ay gubi DVD ah, waxaad u baahan tahay qalab xirfadle ah inuu kaa caawiyo inaad la abuuro DVD xirfadle-raadinta.
Wondershare DVD abuuraha ( DVD Creator for Mac ) waxaa delicated si ay adiga kuugu DVD xirfadle-raadinta. Oo waxaa ugu muhiimsan, si ay u abuuraan sida DVD xirfadle-raadinta, app Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad yeeshaan oo keliya saddex tallaabo oo fudud. Dad badan oo lacag la'aan ah oo qurux badan arrimo DVD menu waxaa la siiyaa, oo dhan aasaasiga ah iyo qaar ka mid ah muuqaalada video tafatirka gaar ah sida beerista, falinjeeerka, qoqobada, watermarking iwm ayaa la heli karaa. Sidaas, kaliya qasabno yar, waxaad si deg deg ah abuuri kara DVD disc qabow ka mid yaab leh JVC Everio videos ee nolol maalmeedkaaga. Markaas, waxaad u ciyaari karin ciyaaryahan DVD ama TV.
1 dejinta aad JVC Everio videos
Si aad u bilaabaan oo leh, furaysto ee fiidiyo JVC Everio galay your computer inay u dhoofiyaan dhan JVC Everio videos aad rabto. Markaas, abuurtaan app iyo dajiyaan videos kuwaas adigoo riixaya "Import" button dhanka bidix. Haddii kale, waxaad si toos ah u furo videos JVC Everio maxalliga ah iyo kuwa ka heli jecel videos aad, ka dibna jiidi oo iyaga hoos u this app ee Murayaad bidix. Ka dib markii in, waxaad ka arki kartaa oo dhan videos soo bandhigay sida thumbnails dhanka bidix.
Haddii aad rabto in aad beddesho si play ah, toos uun u soo jiidi horyaalka video ah meel kasta oo aad rabto, ama guji horyaalka video ka dibna ku dhufatey "↑" ama "↓" ikhtiyaarka ugu hooseysa. Si aad ku dari horyaal oo dheeraad ah si loo abaabulo videos, rukun bidix ugu hooseysa interface ah, waxaad ku dhuftay kartaa "dar horyaalka" button.
2 Edit JVC Everio videos iyo Samee DVD menu ah (optional)
Bandhigaan horyaalka video aad rabto in aad wax ka bedel dhanka bidix, oo guji icon qalinka ku ag yaal. Haddii aad rabto in aad noola video, aad jiidi karaan afargees ciyareedka suuqa kala tafatirka bidix in ay doortaan meesha screen aad rabto iyo arko saameynta-waqtiga dhabta ah ee uu suuqa kala xaq. Si aad u gooyay ku qancin video clip, waxaad riixi kartaa tab goo inay halkaas ku sameeyo. Ka sokow, waxaad sidoo kale isku shaandheyn karaa video, qabsato dhalaalka, bedelkeeda, iyo dar Cinwaan, watermark iwm
Riix tab Menu ku saabsan sare ee suuqa kala app ee ay doortaan mid ka mid ah DVD template menu, ka dibna astaysto thumbnail, qoraalka, soo jeeda music iwm kaliya sida ay ka jeelahay. Si aad u dooratid ka dheeraad ah arrimo free menu , waxaad riixi kartaa cagaaran hoos button fallaadha.
Marka eveything waxaa loo sameeyaa, riix "Kulanka Xiisaha Leh" tab ugu sareysa in ay ku eegaan saamayn tafatir ah. Haddii uu jiro wax aadan ka raali leh, kaliya dib ugu noqoto dib-u-edit waxa.
3 Guba JVC Everio videos in DVD
Ma aad dareento jiro bar ah waxey hoose ee interface ugu weyn this app ee? Waxaa inta badan aad u muujinaysa cabbirka oo dhan videos ku daray. Sida laga soo xigtay size file soo bandhigay, waxaad go'aansan kartaa in aad is geliso DVD5 ama disc DVD9. Ka dib galinta DVD disc maran, waxaad kaliya riix "Guba" tab ugu sareysa. Tickk "Guba si disc" iyo riix "Guba" badhanka si ay u bilaabaan JVC Everio videos in DVD. Dhowr minitues ka dib, DVD disc ah Writen la tuurid si toos ah.
Talooyin: Haddii aadan haysan disc DVD9 laakiin mashruuca DVD aad ka ballaaran yahay 4.7G, kaliya geliso disc D5 ah, barnaamijka si toos ah u cadaadin doonaan.